uPVC Biibiilaha Wanaagsan ee Daboolidda & Soo -saarayaasha iyo Alaab -qeybiyeyaasha
Dhuumaha Kaydka Muuqaal Range Soo dejiso Katalog
Waa maxay sababta Dhuumaha VINYL uPVC
Polyvinyl chloride (uPVC) oo aan la sharraxin, ayaa aad ugu habboon dhismaha ceelka biyaha.
Cufnaanta sare ee uPVC waxay uPVC u dhigaysaa faa'iido si loogu isticmaalo ceelasha biyaha.
Tuubooyinka uPVC waxay leeyihiin cadaadis dhalid aad u sarreeya oo ah 55N/mm. Dabacsanaantooda sare, waxay u oggolaaneysaa inay gaaraan adkaanta loo baahan yahay, tani waxay ka hortagtaa isbeddelka aan loo baahnayn ee tuubooyinka.
Tuubooyinka uPVC waxay u adkaystaan ​​dhammaan walxaha ku milma biyaha dhulka hoostiisa, oo ay ku jiraan asiidhyada iyo cusbada. Adigoo u adkaysan kara biyaha pH inta u dhaxaysa 2-12, kiimikooyinka loo isticmaalo nadiifinta, horumarinta, iyo dib-u-soo-nooleynta ceelasha (ha ahaato mid dabiici ah iyo mid aan dabiici ahaynba) ma saameeyaan tuubooyinkaas.
Ahaanshaha biibiile Casing Caag ah Vinyl uPVC Casing PIpes waxay bixisaa iska caabin aan la qiyaasi karin oo ka dhalan kara kiimikada, iyo daxalka, oo ay kaabayaan ahaanshaha saaxiibtinimo ayaa sabab u ah Vinyl Tubes Pvt. Ltd. Doorashada in la soo saaro.
U dulqaadashada heerkulka sare iyo khafiifnimada tuubooyinka uPVC waxay gacan ka geystaan ​​shaqadooda hooseysa iyo khidmadda dhoofinta waxayna ka dhigaan tuubooyinka uPVC doorashada hawlgallada culus
Dhulku wuu ka yar yahay qilaaf
Awoodda Xamuulka Ugu Badan
100% Cadayn Leak
Macdanta Leedhka Bilaashka ah iyo Biyaha Culus
Awoodda Saamaynta Sare ee Izod
Dhuumaha Vinyl Tuubbooyinka uPVC waxay samaysaa tuubooyin uPVC si ay ugu habboonaato shuruudo kasta oo tuubooyin ah marka la dhisayo kaabayaasha waxaa laga yaabaa inay ku jirto gaaska, saliidda, waraabka ama soo saaridda biyaha.
Dhuumaha cadaadiska ee vinyl uPVC iyo rakibida ayaa naftooda u aasaasay si loogu kalsoonaan karo, oo leh rikoor la xaqiijiyay oo ku jira qaybta dib -u -hagaajinta biyaha. Waxaa loogu talagalay codsiyada bamgareynta iyo naqshadaha cufnaanta labadaba.
Waxqabadka ugu wanaagsan, cimri dheer & eber daadinta ayaa ah waxa Vinyl HDPE/MDPE PIpes lagu yaqaan. Waxaa loogu talagalay: Codsiyada dhulka, hababka gudbinta biyaha ee dowladda hoose iyo warshadaha, qaybinta gaaska dabiiciga ah, Waraabka, beerista, nidaamyada dhuumaha bulaacadaha, dayactirka dhuumaha.
Deep Well system uPVC casing system
Tubooyinka Vinyl waxay soo saaraan nidaamyada kaashka ee uPVC oo si fiican hoos loogu dhigi karo ilaa 600m. Nolosha 50+ sano waxay siisaa macaamiisha xal muddo dheer ah.
Dhuumaha Vinyl Piezometric waxaa loogu talagalay inay daboolaan baahiyaha kormeerka iyo falanqaynta goobta. Waxay aad ugu fiican yihiin Goobta Kormeerka, Muunadaynta Biyaha Dhulka, Kormeerka Biyaha Dhulka & Rakibaadda Xog -hayaha.
Nidaamka Bixinta Wellpoint:
uPVC Casing Pipe company Vinyl Pipes waxay soo saartay nidaamyada biyo -xireenka Vinyl oo caddayn kara inay aad waxtar u leedahay hoos u dhigista miiska biyaha dhulka hoostiisa ee carrada leh isku -duubnaan hooseysa iyo awood -siinta. Waxay ku habboon tahay biyomareennada gacmeedyada halkaas oo heerka biyuhu u baahan yahay in la dejiyo oo aan ka badnayn 15-20 cagood. Nidaamyada biyo -dhaaminta ceelka ee vinyl -ka ayaa kuu oggolaanaya inaad ka garaacdo dhowr gallon daqiiqad kasta oo xariir bacaad ah oo wanaagsan ilaa boqollaal iyo kumanaan gallon daqiiqad kasta oo ah quruurux iyo ciid adag.
Waxay ka muuqataa dhibco si fiican u kala fog agagaarka qodista oo ku xiran madax madaxeed. Tani, markeeda, waxay ku xiran tahay hal ama in ka badan bambooyin. Qodista qoto dheer waxay u baahan doontaa heerar badan oo ah nidaamyada bar -tilmaameedka sababtoo ah xaddidnaanta faaruqinta ee bamka.
Dhuumaha Vinyl waxaa weheliya agabyo iyo agabyo tayo sare leh oo kala duwan oo gacan ka geysta rakibidda guusha ee tuubooyinka uPVC Casing. Qalabkani wuxuu diyaar u yahay dhammaan noocyada kala duwan.
Si fiican u qoto dheer uPVC System Casing System
Waa maxay sababta Dhuumaha VINYL ay ugu fiican yihiin?
Adapters -ka ugu sarreeya ama isku xirayaasha
Xirmooyinka Tuubbooyinka Furashada2
Xirmooyinka Tuubbooyinka Furashada3
dhakhso u socda
Tababarka ugu Fiican
Qabashada iyo Kaydinta